Hailemariam Oo Walaac Ka Muujiyay Masiirka Maalgeliyihii Ugu Weynaa Ee Itoobiya Oo Sacuudiga Lagu Xiray.
Sunday November 12, 2017 - 10:36:34 in Wararka by
Mashaakilka dhanka siyaasadda ah ee ka jira wadanka sacuudiga ayaa saameyn ku sheegay wadamo dibadda ah wadankaasi tan iyo markii isbedello dhan walba ah uu ku dhaqaaqay dhaxal sugaha daaquudka wadankaasi.
Alcamuudi ayaa 88 Milyan ku tabarucay Mashruuca Biya xireenka Itoobiya
Howlgal raaf ah oo isbuucii lasoo dhaafay xukuumadda daaquudkaaAala Sacuud ay ka fulisay magaalada Riyaadh ayaa saameyn ba'an ku reebay seyladaha suuqyada dhaqaalaha mandiqadda ay reergalbeedku u bixiyeen Bariga dhexe kadib markii laxiray maalqabeenno caan ahaa.
Dowladda Itoobiya waxay noqotay dowladda koowaad ee udhutisay saameynta uu yeeshay howlgalkii uu qaaday Max'med Bin Salmaan dhaxal sugaha maamulka aala sacuud, R/wasaaraha xabashida itoobiya Hilmiram Disallen ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu uu si dhow isha ugu haayo xaaladda Nin ganacsade dabadhilif sacuudiyaan ah oo kamid ah dadka laxiray.
Hilmiram ayaa sheegay in laxiray Maxmed Xuseen Alcamuudi oo ah ganacsade gacanta ku hayay inta badan mashaariicda maalgashida wadanka Itoobiya, Itoobiya waxay walaac ka muujisay saameynta uu dhaqaalaheeda kuyeelan karo mashaariicda dhaqaale ee wadanka ka socda.
R/wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in Ganacsade Alcamuudi oo ahaa saaxiib dhow oo dhanka dhaqaalaha la ahaa Addis Ababa islamarkaana xirnaashiyihiisu uusan u uwanaagsaneyn dhaqaalaha wadankaas oo sanadadii lasoo dhaafay turaaturro lakulmayay kadib markii kacdoonada shacabiga ah ay cagta mariyeen warshado waaweyn iyo xarumo ganacsi oo kuyaal duleedka magaalada caasimadda ah.
Ganacsadahan dabadhilifka sacuudiyaanka ah ayaa adduun dhan 88 milyan oo dollar ku tabarucay mashruuca biya xireenka weyn ee alnahda ee Itoobiya doonayso in ay koronto uga dhaliso biyaha wabiga Niil, sidoo kale Alcamuudi wuxuu ahaa Ninka maalgashiga ku sameeya beeraha soo saara Bunka oo ah isha dhaqaale ee ugu weyn wadanka itoobiya.
Itoobiya waxay sheegaysaa in Ganacsadaha sacuudiyaanka ah uu maalgelinayay mashruuca lagusoo saarayo dahabka iyo macdanta laguna sifaynayo.
Tani ayaa ka dhigan in dhaqaalaha xukuumadda xabashida Itoobiya ay kaalin weyn ka qaadanayeen ganacsato katirsan qoyska daaquudka Ala sacuud, dowlado ay kamid yihiin imaaraatka iyo Qadar ayaa sanaddan lacago balaayiin dollar ah ugu deeqay xabashida Itoobiya si ay ugasoo kabsato mashaakilaadka dhanka dhaqaalaha ah ee kasoo gaaray kacdoonkii ay sameeyeen qowmiyadaha Oromada iyo amxaarada.